ပြည်သူကို လေ‌ကြောင်းတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမည် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ပြည်သူကို လေ‌ကြောင်းတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမည်
ကချင်၊ ကရင် စတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်က လေကြောင်းကနေ ဗုံးကြဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ ပြည်သူ အများအပြား ထိခိုက်သေဆုံးပြီး အမြောက်အမြား ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အရေး ကမ္ဘာတဝန်း ဆန့်ကျင် လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် နော်ဝေနိုင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသားတွေက အော်စလိုမြို့တော် ပါလီမန်ရှေ့မှာ မနက်ဖြန် စနေနေ့ စုစည်းဆန္ဒပြပါမယ်။
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဆန္ဒပြပြည်သူတရပ်လုံးကို လူမဆန်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီး ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာပါ။
ကလေးသူငယ် ၄၀ ကျော် အပါအဝင် အနဲဆုံး လူ ၆၀၀ ကျော်ကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ၃,၀၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြဖို့ နော်ဝေရောက် ကချင်၊ ကရင် အဖွဲ့အစည်းများက အွန်လိုင်းကနေ စုစည်းတိုင်ပင်ပြီးနောက် နော်ဝေရောက် တိုင်းရင်းသားအားလုံး စုစည်းပါဝင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ထားတာပါ။
ပါလီမန်ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြဦးရေ ၁၀၀ ကိုပဲ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ခွင့်ပြုထားပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု အရှိန်မြင့်နေဆဲကာလဖြစ်လို့ တဦးနဲ့တဦး အနဲဆုံး နှစ်မီတာ ခြားရမယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
မနက်ဖြန် ဆန္ဒပြပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနဲ့ အားပေးကူညီတဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံရေးသမားများလဲ ပူးပေါင်း ပါဝင်မယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ကြွေးကြော်ချက်တွေလဲ ကြိုတင်ဝေငှထားပါတယ် ...
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု - ချက်ချင်းရပ် !!!
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး - ဒို့အရေး !!!
တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေး - ဒို့အရေး !!!
အရေးတော်ပုံ - အောင်ရမည် !!!
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ဘက် ရပ်တည်နေတဲ့ တရုတ်ရဲ့ သံရုံးရှေ့မှာလဲ မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသားတွေက အပတ်စဥ် ဆန္ဒပြနေဆဲပါ။
မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က မရပ်တည်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ကို မထောက်ခံတဲ့ နော်ဝေဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်မော်မော် ဦးဆောင်တဲ့ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ (Social Punishment) လူမှုပြစ်ဒဏ်ခတ်အရေးယူဖို့ အသိပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
“CRPH”ကို နိုင်ငံတကာပါလီမန်များက အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံရေးအတွက်လဲ နော်ဝေပါလီမန် ဥက္ကဌထံ စာရေးပေးပို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။